လာဘ်ပိတ်၍စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် သစ်တံခါးဆရာတော်၏လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေမည့်နည်းလမ်း - UpdateNew
လာဘ်ပိတ်၍စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် သစ်တံခါးဆရာတော်၏လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေမည့်နည်းလမ်း
မိမိ မွေးနေ့ ၏ နံနက်ပိုင်း ၉:၄၅ မိနစ် (သို့ ) ၁၀:၁၀ မိနစ် တွင် ဆောင်ရွက်ရပါမည် ။ထူးခြားစွာ လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေနိုင်ပါသည်။
ကြေးအိုး (သို့) အောင်အိုး(သို့) မြေအိုးပတ်လည်တွင် ” စ,ဓ,ဗ,ဝ.. အောင် လာဘ် ရွှင်စေ ငွေဝင်စေရန် ကင်းစေ အောင်မြင်စေဟု ရေးပါ။ဈေးဆိုင် ကုမ္ပဏီဆိုင်ဖြစ်ပါက ရောင်းကောင်းစေပါသည်။ထို့နောက် ထိုအောင်အိုးအတွင်းသို့ မိမိ၏ နေ့နံ ပ ဉ္စပွတ် –ဆပွတ် အညွန့်အား၊ ဂြိုလ်သက် အလိုက် ထည့်၍ အိမ်၊ ရုံးခန်၊း ဆိုင်ခန်းစသည့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့် အမြင့်တစ်နေရာ တွင် တင်ထားပါ။
၃ ရက် ပြည့်လျှင် တစ်ကြိမ် လဲပေးပါ။ ထူးခြားစွာသိသာလာစေပါသည်။အမြဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကလည်း ကောင်းပြီး၊အမြဲမလုပ်ပါက(၁၀)ရက်ဆောင်ရွက်လျှင် ရပါသည်။မှတ်ချက် ပ ဉ္စပွတ်၊ ဆပွတ်၊ အညွန့်ပန်းများ တွဲထိုးရာတွင် ပညက်ဖော်၍မထိုးမိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။ဒါက မိမိမှာ ပိတ်ဆို့နေသောကံကိုဖော်ပြီးစရဏအားဖြင့် မြှင့်တင်သောနည်းစနစ် ဖြစ်ပါသည်။အ တော်ကောင်းပါသည်။
တကယ်လာဘ်ပိတ်ပြီး စိတ်ညစ်နေရသူများသေချာသတိထားပြီး(၁၀)ရက် အဓိဋ္ဌာန်ပြုကာဆောင်ရွက်ကြပါ။ ထူးစွာ လာဘ်ပွင့်ပြီး စိတ်အေးရပါမည်။
“အရဟံ၊ ဗုဒ္ဓေါအရဟံ၊ အရဟံ ဗုဒ္ဓေါ၊ ဗုဒ္ဓဿ ဂုဏာ တေဇသာ၊ သဗ္ဗ သိဒ္ဓိ လာဘံ မေ ဘဝိဿတိ”
ဟူသောဂါထာဖြင့်ပုတီးစိပ်၍သော်လည်း ကောင်း (၂၇) ခေါက် ရွတ်၍ သော် လည်းကောင်းမနက်တိုင်းနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ပေးပါကပို၍ထိရောက်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေ – ပျဉ်းမ (၁၉)၊ သီဟိုဠ် (၂၁)
တနင်္လာ – သီဟိုဠ် (၂၁)၊ ထန်း (၁၀) ညွန့်
အင်္ဂါ – ထန်း (၁၀) ညွန့်၊ အုန်း (၆) ညွန့်
ဟူး – အုန်း (၆)၊ ကံကော် (၁၅)
တေး – ကံကော် (၁၅)၊ ဇီး (၈)သောကြာ – ဇီး (၈)၊ ရွက်လှ (၁၇) စနေ – ရွက်လှ (၁၇)၊ ပျဉ်းမ (၁၉)
ဥပမာ တနင်္ဂနွေဖြစ်ပါက ပျဉ်းမ(၁၉)သီဟိုဠ် (၂၁)၊ သောကြာသား ဖြစ်ပါကဇီး(၈)ရွက်လှ(၁၇)တို့အား အောင်အိုးတွင် ထိုးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ် မလုပ်ပဲနှင့်တော့ မည်သည့်ဝင်ငွေမှ မရနိုင်ပါ!
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
လာဘျပိတျ၍စိတျညဈနသေူမြားအတှကျ သဈတံခါးဆရာတျော၏လျာဘျပှငျ့၍ ငှရှေငျစမေညျ့နညျးလမျး
မိမိ မှေးနေ့ ၏ နံနကျပိုငျး ၉:၄၅ မိနဈ (သို့ ) ၁၀:၁၀ မိနဈ တှငျ ဆောငျရှကျရပါမညျ ။ထူးခွားစှာ လျာဘျပှငျ့၍ ငှရှေငျစနေိုငျပါသညျ။
ကွေးအိုး (သို့) အောငျအိုး(သို့) မွအေိုးပတျလညျတှငျ ” စ,ဓ,ဗ,ဝ.. အောငျ လာဘျ ရှငျစေ ငှဝေငျစရေနျ ကငျးစေ အောငျမွငျစဟေု ရေးပါ။ဈေးဆိုငျ ကုမ်ပဏီဆိုငျဖွဈပါက ရောငျးကောငျးစပေါသညျ။ထို့နောကျ ထိုအောငျအိုးအတှငျးသို့ မိမိ၏ နနေံ့ ပ ဉ်စပှတျ –ဆပှတျ အညှနျ့အား၊ ဂွိုလျသကျ အလိုကျ ထညျ့၍ အိမျ၊ ရုံးခနျ၊း ဆိုငျခနျးစသညျ့လဝေငျလထှေကျကောငျးသညျ့ အမွငျ့တဈနရော တှငျ တငျထားပါ။
၃ ရကျ ပွညျ့လြှငျ တဈကွိမျ လဲပေးပါ။ ထူးခွားစှာသိသာလာစပေါသညျ။အမွဲ ဆောငျရှကျနိုငျပါကလညျး ကောငျးပွီး၊အမွဲမလုပျပါက(၁၀)ရကျဆောငျရှကျလြှငျ ရပါသညျ။မှတျခကျြ ပ ဉ်စပှတျ၊ ဆပှတျ၊ အညှနျ့ပနျးမြား တှဲထိုးရာတှငျ ပညကျဖျော၍မထိုးမိစရေနျ ဂရုစိုကျပါ။ဒါက မိမိမှာ ပိတျဆို့နသေောကံကိုဖျောပွီးစရဏအားဖွငျ့ မွှငျ့တငျသောနညျးစနဈ ဖွဈပါသညျ။အ တျောကောငျးပါသညျ။
တကယျလာဘျပိတျပွီး စိတျညဈနရေသူမြားသခြောသတိထားပွီး(၁၀)ရကျ အဓိဋ်ဌာနျပွုကာဆောငျရှကျကွပါ။ ထူးစှာ လာဘျပှငျ့ပွီး စိတျအေးရပါမညျ။
“အရဟံ၊ ဗုဒ်ဓေါအရဟံ၊ အရဟံ ဗုဒ်ဓေါ၊ ဗုဒ်ဓဿ ဂုဏာ တဇေသာ၊ သဗ်ဗ သိဒ်ဓိ လာဘံ မေ ဘဝိဿတိ”
ဟူသောဂါထာဖွငျ့ပုတီးစိပျ၍သျောလညျး ကောငျး (၂၇) ခေါကျ ရှတျ၍ သျော လညျးကောငျးမနကျတိုငျးနစေ့ဉျရှတျဖတျပေးပါကပို၍ထိရောကျပါသညျ။
တနင်ျဂနှေ – ပဉျြးမ (၁၉)၊ သီဟိုဠျ (၂၁)
တနင်ျလာ – သီဟိုဠျ (၂၁)၊ ထနျး (၁၀) ညှနျ့
အင်ျဂါ – ထနျး (၁၀) ညှနျ့၊ အုနျး (၆) ညှနျ့
ဟူး – အုနျး (၆)၊ ကံကျော (၁၅)
တေး – ကံကျော (၁၅)၊ ဇီး (၈)သောကွာ – ဇီး (၈)၊ ရှကျလှ (၁၇) စနေ – ရှကျလှ (၁၇)၊ ပဉျြးမ (၁၉)
ဥပမာ တနင်ျဂနှဖွေဈပါက ပဉျြးမ(၁၉)သီဟိုဠျ (၂၁)၊ သောကွာသား ဖွဈပါကဇီး(၈)ရှကျလှ(၁၇)တို့အား အောငျအိုးတှငျ ထိုးရမညျ ဖွဈပါသညျ။
အလုပျ မလုပျပဲနှငျ့တော့ မညျသညျ့ဝငျငှမှေ မရနိုငျပါ!
သဈတံခါးဆရာတျော၏ စာအုပျမှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
ခရီးသည်(၁၀၇)ဦး လိုက်ပါလာတဲ့ ပါကစ္စတန် လေယာဉ်လူနေအိမ်တွေထဲ ပျက်ကျမှု လေယာဉ် Accident ( Video မှတ်တမ်း )